I-Kip B&B | Isitudiyo - I-Airbnb
I-Kip B&B | Isitudiyo
Itholakala ngemuva kwendawo, ehlukene ne-villa, isitudiyo silungele izivakashi ezifuna ubumfihlo obuthe xaxa. Inomnyango wayo wangasese, iphuma nendlu yokugezela yasehlathini enhle yangaphandle (akukho manzi ashisayo), ingadi encane yangaphambili, indawo yokupholisa umoya kanye nendlu encane yezihlahla. Igcwele yonke imininingwane ebalulekile nokunethezeka kwezidalwa ezijwayelekile: amalineni athambile ekhwalithi ephezulu, amathawula aluhlaza, izihlambi zemvula, amafeni angaphezulu, usilingi oluphezulu, i-wifi yamahhala nokubukwa kwehlathi.
Indawo epholile, indawo yokuhlala enobungane, indawo yokuhlangana.
Ihlehlisiwe ukusuka emgwaqeni omkhulu omatasa endaweni encane yendabuko, ezungezwe ihlathi eliluhlaza, enolwandle olucezile ekugcineni komgwaqo, I-Kip iyigugu esihlale siliphupha.
Izungezwe amahlathi aluhlaza nomsindo wokuphuka kwama-surf, i-The Kip iyindawo yethu yokucasha emaphakathi ne-Sri Lankan South Coast, ikhaya lazo zonke izinto ezihamba kancane, eziqhubekayo futhi ezinobuciko. Ukulandela izimiso zokuthi 'okuncane kuningi' kuwo wonke amagumbi ethu, uzothola ukunambitheka kwempilo ehamba kancane.
I-villa igxile egcekeni layo elivulekile, kuyilapho ngemuva kwesakhiwo sikabhanana, izihlahla zikakhukhunathi nokwatapheya zinala zenza indawo yokuphumuza umoya, uphumule futhi ugone isithupha sakho esiluhlaza.
Singakusiza ukuthi uhlele ukudluliselwa kwangasese ukuya/kusuka esikhumulweni sezindiza nanoma yikuphi kwenye indawo esiqhingini ngabashayeli bethu abathembekile nabathembekile.
Itholakala ngemuva kwendawo, ehlukene ne-villa, isitudiyo silungele izivakashi ezifuna ubumfihlo obuthe xaxa. Inomnyango wayo wangasese, iphuma nendlu yokugezela yasehlathini enhle yangaphandle (akukho manzi ashisayo), ingadi encane yangaphambili, indawo yokupholisa umoya kanye nendlu encane yezihlahla. Igcwele yonke imininingwane ebalulekile nokunethezeka kwezidalwa ezijwayelekile: amalineni athambile ekhwalithi eph…
I-Ahangama yiphakethe elincane elisenobuqiniso bomlingo. Kuphunyukile ukuhwebelana kwembulunga yonke kanye nokuvakasha okujwayelekile futhi siyakulangazelela ukuthi kuhlale kunjalo.
Imibono evulekile yokucabanga kanye nefilosofi (sobabili singama-Saggitarius’) kwasiholela, u-Phoebe no-Seddy, e-Sri Lanka lapho sifuna injongo yokuphila - ukwamukela izinto esizithandayo, ukuxhunywa futhi sibe izinguqulo zethu ezingcono kakhulu. Sivule i-Kip ukuze simeme abantu ekhaya lethu futhi sibanikeze ithuba lokucaciseleka engqondweni - njengoba nje senza eminyakeni emithathu edlule.
Yize sizofinyeleleka futhi/noma sisendaweni njalo, abasebenzi bethu basendaweni abahle bazokujabulela kakhulu ukusiza uma singekho. Ukuphila “njengabantu bendawo yase-lanka” kule minyaka engu-2 edlule singathanda ukukunikeza umhlahlandlela wethu wangaphakathi oya kokungcono kakhulu isiqhingi esingakunikeza - ukusuka kuma-surf ayimfihlo nezindawo zokubhukuda kuya ezindaweni zokudlela ezifihliwe kuya ekuzibandakanyeni kangcono nomsebenzi womphakathi lapha. .
Imibono evulekile yokucabanga kanye nefilosofi (sobabili singama-Saggitarius’) kwasiholela, u-Phoebe no-Seddy, e-Sri Lanka lapho sifuna injongo yokuphila - ukwamukela izinto esizit…